Mkhitaryan oo waji gabax kala kulmay rajadii uu qabay ku biiridda Inter – Gool FM
Mkhitaryan oo waji gabax kala kulmay rajadii uu qabay ku biiridda Inter
Kaafi January 4, 2018
(Milan) 04 Jan 2018. Luciano Spalletti waxa uu ku adkeystay in uusan suuqa kala iibsiga ee bishan qarash badan ka soo bixin doonin ciyaaryahano sida Henrikh Mkhitaryan oo hoos uga dhacay xulasha Manchester United.
Spalletti waxa uu sidoo kale cadeeyey in uusan bisha Janaayo u arkin wado uu dib hurdada uga jafo safkiisa toddobadyadii dambe jiiftay.
“In aan ku cel celiyo waxaan u baahannahay olole qarash badan suuqa lagu galinayo suuqa, kaddib markii ay kooxdu caddeysay in ay jiraan waxyaabo in la qadariyo mudan, waxa ay u muuqataa waxa ugu wacan in ay tahay in la xanuunsado,” ayuu u sheegay wariyeyaasha.
“Magacyo waad sheegi kartaa – Mkhitaryan, Pastore, Verdi. Laakiin waxa ay ku kacayaan midkiiba €30 million taasna ma haysanno.”
Banki Qadari ah oo 13 bilyan oo doollar ku doonaya xuquuqda baahinta horyaalka Talyaaniga!
RASMI: Arsenal oo gacanta ku dhigtay saxiixii kowaad ee Janaayo